Hirka isticmaalka warbaahinta maalmahan ku baaqaynaa in ruuxaanta weyn iyo ciyaartoyda warbaahinta in la naqo abuuray. Dadka ay masawirada, qabsadaan gaar ah videos ay, duuban, la wadaago videos iyo dhismaha maktabadaha ay warbaahinta waa maalin caadi ah in goobaha maalintaas waxaan u arki karaan. Suxuufiyiinta lagu ciyaari doono qalab kasta sida ku telefoonada casriga ah, iyo sidoo kale kombiyuutarada shakhsi.
Si kastaba ha ahaatee, tiro badan oo ka mid ah ciyaartoyda video ma ka dhigan tahay in dhan oo iyaga ka ciyaari karaa hal videos kasta oo isticmaala doonayaan. Mid ka mid ah laga yaabo in loo isticmaalo noocyada kala duwan ee ciyaaryahan ciyaaro ka file nooca mp4 ah si faylka nooca wma ah.
Waayo, kuwa qalabka Samsung, ma dhammaan taleefanada dhab ahaan ka ciyaari kara qaar videos la qaabab sida .mkv ama .amr. Halkan, waxaan la soo bandhigid doonaa 5 sare Samsung ciyaartoyda video aad Raaxo kama dambaysta ah:
The software Wondershare cajiib ah, ayaa waxa horumariyay Wondershare Software Co. Ltd. Iyadoo software this, users Samsung ay awoodaan in ay arkaan iyo ciyaaro kala duwan videos ku dhawaad ​​qaab kasta oo la ciyaaray karaa qalabka tiro badan waxaa ka mid ah in aad casriga ah, kiniin ah, xusuus qor, fiidiyo iyo waxa aan. Wondershare Dalabyada:
Iyada oo cusub ba'an X technology Wondershare ee, dadka isticmaala waxay awoodi karaan inay isla raaxaysan! Marka la barbar dhigo software kale, warbaahinta ayaa la ciyaaray ku dhawaad ​​isla markiiba ku Wondershare; garaaceen jeer loading ciyaartoyda kale.
HD Video Yididiilo
Wondershare Bixisaa waayo-aragnimo HD sida non - kale. Its codecs sare u oggolaanaysa in waayo-aragnimo warbaahinta cajiib ah halka ayna ee hardware GPU ugu fiican-in-fasalka qaab video damaanad qaadi karno. Waxaa intaa dheer in, aad astaysto ka Cinwaan size, midabka, font iyo iyaga dhig sidaad u kala jeceshahay.
User Friendly - dareen Design
The badhamada multi-functional yeelan karaan dadka isticmaala sii raaxaysan warbaahinta ciyaaro ay ugu fiican. Laga soo bilaabo hab mini in sawir-qarxaya toogashada iyo tolo la hal-riix, kontaroolada ayaa miyir ku kaalinta loogu talagalay dadka isticmaala ay.
2. VLC media player (VLC) ( http://www.videolan.org/vlc/ )
VLC waa mid ka mid ah software ugu caansan taageera awoodo tiro ka mid ah audio iyo video files. Waxay soo saareen oo uu qoray mashruuca VideoLAN ah, VLC ordi kartaa ku dhowaad dhammaan dhufto ee ay ka mid yihiin Windows, Linux, Mac OS X iyo Unix. Ciyaaryahan warbaahinta Tani waa si ay u qabtaan diinta warbaahinta iyo geeyo awood. Marka laga reebo in, VLC sidoo kale:
Taageer qaabab warbaahinta kala duwan
VLC ciyaari karo codecs ugu iyada oo aan la baakad codec loo baahan yahay; laga bilaabo WMC in MP3.
Download Free Available
Users heli kartaa VLC la kharash dheeraad ahna lahayn, ma user statistics, spyware toona xayeysiis.
Moboplayer ciyaari karaa noocyo kala duwan oo badan oo qaabab video ay ku jiraan kuwo kale, MKV, MOV, AVI, iyadoo dadka isticmaala ay la fududaato in la isticmaalo; kuu oggolaadaan in aad la xakameeyo nuur iyo mugga. Subtitles Multi iyo durdurrada multi audio waxaa taageera iyo weliba. Qaar ka mid ah qaababka ay ugu weyn waxaa ka mid ah:
Waafaqsan yahay qalabka ugu
Mobo taageertaa dhammaan qalabka android la ARM iyo naqshadaha x86 oo daboolaya qaab video ah kelmadaha SW
Loo maqli karo tayada sare
Thanks to engine kelmadaha dual, users la kulmi karaan oo tayo leh loo maqli fiican iyo waxqabadka.
MX Player waxaa sameeyay J2 Interactive iyo software ka isticmaalaan furan technology codec il u saamaxaya in ay ka daadanayo iyo ku dhowaad dhammaan qaabab warbaahinta ugu weyn. Ciyaaryahanka Taasi laftigeeda faantaa la ciyaaro HD qeexitaanka sare video files; dadka isticmaala ku raaxaysan karaan daawashada cajaladaha sida daawashada TV-ga waxaa, ciyaartoyda warbaahinta ama tiyaatarada guriga. MX Player sidoo kale lagu yaqaanaa in ay:
Loo isticmaali karo in ka badan videos- in HW + decoder cusub mahad.
Ciyaaryahankii hore video Android taageera multi-muhiimka ah kelmadaha; waxaa la xaqiijiyey in qaab dual-muhiimka ah qalab ay tahay wax badan ka wanaagsan yahay kuwa qalabka asaasiga ah hal.
VPlayer waa video ciyaaryahan si sahlan loo isticmaalo in ay diyaariyeen Xuan Yi Xia Inc. Users of this software weyn yihiin inay isticmaalaan software this on nooc oo kala duwan oo qalab iyo taageero ciyaaryahanka liiska aadka u badan ee audio iyo video qaabab awoodaan. Faa'iidooyinka VPlayer ka mid ah:
Hawlaha Radidiyaha waxaa maamula si ka dhaqso badan waxa suurto gal socda ee processor Ujeedada general-.
VPlayer waa u fududahay in ay maraan; dadka isticmaala si fudud u qabsato karaa dhalaalka shaashadda iyo xakameeyo mugga.
Sidee si ay u gudbiyaan Videos ka Your Computer Personal in a Phone Samsung
Waxay dooneen inay qabsadaan in TV-taxane in safarada baska maalin kasta laakiin waxay leeyihiin oo dhan videos ee your computer shakhsi? Waxaa jira habab kala duwan si ay u isticmaalaan in wareejinta oo ay ku jiraan iibsiga USB, email, ama adigoo isticmaalaya Bluetooth app ah. Shaqsi ahaan, waxaan heli wareejinta faylasha by cable USB waa u fududahay sida hoos ku qeexan.
Talaabada 1: si aad u computer shakhsi Connect qalab Samsung
Your qalab Samsung heli doontaa ogeysiis ah qalabka ku xiran sida aad computer shakhsi. Fur degdeg ah iyo dooro "Connected sida qalabka warbaahinta ah", ka dibna dooro "Media qalab (MTP)". Tani waxay u ogolaaneysaa Windows sahamisa ee Mac Finder in gacanta lagu wareejiyo files si aad telefoonka.
Talaabada 2: Raadi qalab Samsung hoos your computer shakhsi
Tusaale ahaan Windows Explorer, heli qalabka sida disk laga saari, waa la furo iyo aad u hesho "Videos" folder.
Talaabada 3: Saxiixa videos in aad qalab Samsung
Intaas ka dib, si fudud u jiidi jeedi videos ka your computer si gal in si gaar ah.
Maxaad Samsung ma ciyaari karo Videos ah
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kiisas halkaas oo videos aan lagu ciyaari karo kuwaas hababka wareejinta. Inta badan, files aad u kharribmay karaa inta lagu guda jiro geeddi-socodka wareejinta. Marka kale, qalab Samsung ma uu qaadi karin qaabka files ama si fudud ma laha software ku haboon inuu ka ciyaaro videos ah.
Samsung ay taageerayaan Video qaabab
Your qalab Samsung caadi ahaan taageeri doono waxyaabaha soo socda qaabab video; MP4, AVI, MKV, 3GP, MMV iyo FLV. Haddii qaabab waa ka duwan yahay kii kuwan yaryar ku qoran, waxaad ka fekeri kartaa diinta videos in ay qaab kale oo lagu ciyaari karo qalab aad.
Wondershare Video Converter Ultimate Si loogu badalo Your Videos
Haddii aad u baahan tahay si loogu badalo weligood wax videos, si fudud ku kalsoon ugu fiican in uu yahay Wondershare Video Converter Ultimate. Qalabeed Tani video ka Wondershare users ah u saamaxaaya in ay ku dhawaad ​​daawado qaab kasta oo ka mid ah videos, bedelo, kor loogu qaado oo iyaga ha ahaatee badalo ay jecel yihiin oo ay wali ilaaliyo tayada sareeya ee videos.
Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate, users u hesho in ay dhadhamiyaan Raaxo soo socda:
• Dhignaashada - Sida ee hadda, waxaa jira 159 qaabab ay taageerayaan iyo qaabab dambeeyay waxaa lagu daray waqti ka waqti.
• 30x dhakhso Video Conversion.
• beddelidda, si ay wax qaabab ahaanba.
• durduri files warbaahinta on PC ah in Smart TV la hal-click.
> Resource > Android > Top 5 Samsung Video Players inaad barataa